I-China CPLA Compostable Cutlery Rakeil Box nge Display Tear-away Box Production kanye neFektha | IGianty
Lo mkhiqizo ufakwe Ngokukhethekile ngebhokisi lephepha eliPrintiwe nge-Bona-ngokusebenzisa Window. Idizayinelwe ukuba ibe nokudla okuhlala isikhathi eside futhi eshisayo enobungane kuze kufike ku-85 ℃. Imikhiqizo yethu idlulise i-BRC, BPI, FDA ne-EU. sinosayizi nemibala ehlukene. Ama-tableware asetshenziswa kabanzi endaweni yokudlela, iphathi, umshado, ipikinikini, isitolo, imakethe eyi-super nenye indawo yokudla.
Ubukhulu ekusekeni kwakho kwendabuko okulahlekayo, nge-CPLA Cutlery Range yethu. Lolu banga lubushelelezi, luhlala isikhathi eside, luqinile, futhi luhle kakhulu esandleni ngokuqhathaniswa nokusikeka okujwayelekile kokulahlwa kwepulasitiki. Uma ungakaze uyisebenzise ngaphambili uzothakazeka, futhi namakhasimende akho uzokwenza kanjalo. Ukukhuphukela phezulu kumimese yethu, imfoloko, nezinsalela ze-CPLA kungahle kufike ku-premium kancane - kepha ikhasimende lakho lizokujabulela ukudla kwabo liphephile olwazini ukuthi banciphisa umthelela wabo endalweni. (I-Cutlery ngayinye ihlanganiswe kahle njengensimbi)
Ukuzisika kwethu akulungele ukuphrinta. Ibhokisi elingaphakathi nebhokisi lokudabula konke kungaphrintwa kusuka kwinani elincane le-oda lamabhokisi angama-50 000. Futhi singakwazi ukuklama ibhokisi ngokwezidingo zakho. Ungakhetha kunoma yiziphi izingxenye zesitoko sethu bese ucacisa inhlanganisela oyifunayo yezinto. Ngeminye imininingwane, ungathumela uphenyo ku-n info@ecogianty.com.
• Ukuthengisa Ukupakisha Ukuhambelana Nezidingo Zekhasimende.
Into CPLA I-Cutlery Retail Ibhokisi eline-Display Tear-away Box
Okuqukethwe I-7 intshi 24pcs i-cutlery / ibhokisi lezitolo
Ubukhulu bebhokisi lokuthengisa 18 * 11.8 * 2.9cm
Khombisa usayizi webhokisi lokukhipha esikhaleni 25.5 * 12 * 19cm
Isibalo seCaton Amabhokisi ayi-9
Usayizi weCarton 25.5 * 12 * 19cm
Esedlule: ICPLA Plastic-free Sustainable Renewable Cutlery Kit - Isikhwama esinamandla
Olandelayo: I-Eco-friendly bamboo Fibre Baby Dinner I-Tableware Set
Isethi yeCostlery Combo Set